Zụlite Persona bụ Ọkpụkpọ, ọ bụghị Nkedo | Martech Zone
Ingzụlite Persona bụ Ọkpụkpọ, ọ bụghị Nkedo
Wenezde, August 31, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Ndị ụlọ ọrụ na ndị mmadụ na-enwekarị oke ọkụ na nchedo akara ha ma ọ bụ mmadụ na ntanetị. Schoollọ akwụkwọ ochie nke ahịa kụziiri anyị na ihe niile gbasara ika anyị ga-ekwu izu okè… na izu okè bụ ihe rere. Anyị nwere akara ngosi zuru oke, nkwakọ ngwaahịa zuru oke na slogans zuru oke iji soro ha. Thelọ akwụkwọ ochie nke ahịa na-akụda mmụọ kwa mgbe. Ozugbo anyị tọpụrụ ma jiri ngwaahịa ahụ, anyị ga-enwe nkụda mmụọ ọtụtụ mgbe. Ọ bụghị ihe ijuanya na ihe kpatara na ndị mmadụ anaghị atụkwasị obi n’ahịa.
Na ịwakpo ọnụnọ ha n'ịntanetị, omume ochie ahụ anwụbeghị. Ieslọ ọrụ freak si mgbe e nwere ihe pixel si ebe… ma ọ bụ njọ, na-arụ ọrụ na-agba ọsọ amok. Otu onye nwe ụlọ ọrụ gwara m na Facebook ihe dị n’izu gara aga ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ya akparị mmadụ na tweet, ọ ga-achụpụ ha. Nke ahụ na-eme ka ogwe ahụ dị elu… zuru oke. Enwere m olileanya na anyị abụọ kwenyere na enweghi ike ịchọta izu okè. Achọghị m ịzụ ahịa na gị n'ụlọnga m kwuru okwu nke online n'ihi na ọ kwụsịrị ịtụkwasị m obi ozugbo. Enweghị m ike ịrụ ọrụ dị ka onye dị otú ahụ n'ihi na m na-emehie mgbe niile. Ọ bụ ụjọ ịda mba na-eme ka ndị mmadụ kwụsị ịga n'ihu ma nwee ọganiihu.
Ezughị okè bụ otu n'ime njirimara nke nghọta… nke bụ ihe ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-aga n'ihu na-ekwusa. Ọ bụrụ na enwere pikselụ ebe na saịtị gị, Aghọtara m! Enwere m ole na ole n'onwe m - yana obere sistemụ arụmọrụ yana ọtụtụ ihe nchọgharị, ebumnuche nke izu oke bụ, ọzọ, anaghị enweta ya. Ọ bụrụ na ị kwuo ihe ihere - ọ dị mma - ekwesịrị m. Ọ bụrụ na i mehiere - Chineke makwa na m nwere, kwa!
Zụlite mmadụ gị n'ịntanetị abụghị maka ịtụfu ihe oyiyi nke onwe gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ya wee tinye oyiri zuru oke na ntanetị maka ngosipụta. Ọ bụ maka ihe onyonyo gị ịbụ ezi ngosipụta nke onwe gị - yana ezughị okè na mmejọ ya. M na-agabiga iwu nke ụtọ asụsụ na blọọgụ a yana ịkọwa okwu kachasị mfe. Mgbe e mere ka m mata ya, m na-aga azụ mezie ya. Nke ahụ bụ ihe dị oke mma gbasara ihe a… anyị nwere ike ịkpụzi ya n’ụdị anyị ga-achọ ka ọ dịrị.
Ọ bụrụ n ’ị na-anya ndị na-ese ihe nkiri, ndị mmepe, ndị na - ere ahịa na mkpụrụ osisi PR na - achọ ime ihe niile zuru oke, ị na - emebi karịa mma. Nke mbu, ndi mmadu choro iso ndi ha choro na aru oru. Ọnweghị onye ọ bụla amasị onye na-achọkarị izu okè. Nke abuo, igbu oge ị na-agbanye na-emebi ọganihu gị karịa ka ị na-aga n'ihu na-emezighị emezi. Ewezuga n'ezie bụ nnukwu gaff nke ga-emebi aha gị kpamkpam. Ọbụna ndị ahụ dị obere, n'agbanyeghị.
Mgbe ị na-aga n'ihu ndị ọzọ, asọmpi adịghị oke. Iji rite uru na akụnụba nke taa, omenaala taa na ọsọ anyị na-aga, ị ga-apụrịrị n'isi gị ma kwalite n'ihu. N'etiti ehi na ụlọ ahịa China, Bull ga-emeri oge ọ bụla.
Anwala nkedo gị zuru okè persona online. Kama, tufuo apịtị n’ebe ahu wee bido ịkpụzi ya n’ụdị ịchọrọ. N'ime oge, ọdịdị ahụ ga-apụtawanye ìhè. Ka oge na-aga, ndị mmadụ ga-amụta ịmata gị na ntụkwasị obi gị. N'ime oge, ndị mmadụ ga-azụta n'aka gị. N'ime oge, ị ga-enwe nnukwu ndị na-eso. Offọdụ n'ime anyị achọpụtala nke ahụ. Ndi nke ana ahapụbeghi na unyi.
Atụla egwu. Bụrụ ngwa ngwa. Dị uchu iji dozie ya ka ị na-aga.
Esi meziwanye EdgeRank na Facebook